Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha ciidamada booliiska Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug
May 10, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cusmaan Xasan Cuuke sidoo kale loo yaqaan (Af-dalow). [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug Cusmaan Xasan Cowke ayaa waxaa shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidamada booliiska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax.
Wareysi uu siiyay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir, Cowke ayaa sheegay in uusan weli aqoon sababta shaqo joojinta loogu sameeyay.
Afdalow ayaa sheegay in uu aqbalay shaqo joojinta uuna shaqada ku wareejiyay ku xigeenkiisa isaga oo ka jawaabcelinaya amarka kasoo baxay taliyaha.
Waxaa loo magacaabay taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug bartamihii bishii Janaayo ee sanadkan.
November 12, 2016 Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo xilkii ka qaaday taliyihii booliiska qeybta gobolka Nugaal
October 7, 2017 Madaxweynaha Puntland oo taliyaha ciidanka booliiska dib ugu fasaxay shaqadiisa
December 19, 2016 Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo mamnuucay isticmaalka gawaarida muraayadaha madow
Puntland’s police chief suspends Mudug regional police officer
London Somalia Conference opens in London
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo dhici doonta 30 April
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhici doonta 30 April, sida maanta oo Axad ah ay bayaan ku sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada. Musharixiin badan ayaa tartamaya, oo uu ku jiro Wasiirka Gaashaandhiga Mursal Shiikh [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least 10 people were killed and 20 others were wounded after a truck laden with explosives was detonated the outside gate of the Somali presidential palace in Mogadishu on Tuesday. The blast [...]
Iran oo cambaareysay badmaax dalkeeda u dhashay oo ay dileen ciidanka badda Puntland
Tehran-(Puntland Mirror) Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada Iran Bahram Qassemi ayaa cambaareeyay rasaas lagu furay dooni kalluumaysi oo Iran lahayd iyo dilka kabtankii doonida iyadoo sidoo kale hal badmaax oo kale uu ku dhaawacmay. “Iran waxay cabshadeeda [...]